द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | मई 15, 2018 | व्यावसायिक विकास
यो आज एक वास्तविकता हो, हामी हाम्रो सबै जीवन एक कम्पनीमा खर्च गर्दैनौं।
त्यसैले जब क्षण वा क्यारियरहरू परिवर्तन गर्ने इच्छा उत्पन्न हुन्छ, क्षमताको मूल्याङ्कनको प्रश्न उठ्छ।
यो एक महत्वपूर्ण कदम हो जब तपाईं आफ्नो क्यारियर बदल्न चाहानुहुन्छ वा तपाइँ एक पेशेवर प्रोजेक्ट विकास गर्न चाहानुहुन्छ।
यसैले यहाँ7युक्तिहरू हुन् जुन तपाईंको पक्षमा बाधाहरू राख्नका लागि तपाईंको दक्षता निर्धारण सफल गर्न।
किन कौशल मूल्यांकन?
एक कौशल मूल्यांकन आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा धेरै अंकहरूमा गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं आफैलाई भन्नुहुन्छ भने, "म मेरो कामको वरिपरि गएको छु र म दिनचर्याबाट बच्न चाहन्छु।", "मलाई मेरो व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनको बीचमा अधिक सन्तुलन चाहिन्छ।" वा "म आफैलाई पुनःप्राप्त गर्न चाहन्छु र मेरो करियर परिवर्तन गर्न चाहन्छु।" के यो सही समय हो? "त्यसपछि कौशलको मूल्यांकन आवश्यक छ।
एकपटक तपाइँ यी प्रश्नहरूलाई कार्यहरूमा बदल्न सक्नुहुन्न, कौशल मूल्याङ्कनले तपाईंलाई क्यारियर प्लानको बारेमा स्पष्ट रुपमा हेर्न मद्दत गर्न सक्छ।
टिप # 1: सही समयमा एक ब्यालेन्स पाना बनाउनुहोस्
कौशलहरूको एक ब्यालेन्स पानालाई सुधार गर्न सकिँदैन, तपाईंले 100% लाई दिनुपर्छ।
उदाहरणको लागि, तपाईं गतिविधि को कम तीव्र छ जब तपाईं वर्ष को समय चुन सकते हो।
महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यानपूर्वक सोच्न र तपाईंको क्यारियरमा एक कदम फिर्ता लिन समय छ।
टिप # 2: तपाईंको कौशलहरू लाई पोषित गरिएको रिपोर्ट गर्नुहोस्
एक 1200 र 2000 यूरो को बीच कौशल को रिपोर्ट को रिपोर्ट।
तपाइँ यसलाई आफैं वित्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो DIF (प्रशिक्षणको लागि व्यक्तिगत अधिकार) वा पोल एम्पोपो मार्फत प्रयोग गर्नुहोस्।
रिड एक लामो अभाव पछि काम गर्न सफल फिर्ता
टिप # 3: दायाँ संगठन छनौट गर्नुहोस्
संगठनलाई छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंको कौशल मूल्याङ्कनको शुल्कमा हुनेछ जुन सुन्ने, व्यावसायिकता र संश्लेषण गर्ने क्षमता गुणस्तर कोचिंगको लागि आवश्यक छ।
टिप # 4: राम्रो तयारी गर्दै
आफ्नो दक्षता निर्धारणको मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो क्यारियर र त्यससँगै जाने कौशलहरू फिर्ता जान्छ।
तपाईं पनि कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना आकर्षित को लागी क्षेत्र को स्टक लिन आवश्यक हुनेछ।
टिप # 5: परिणामहरू विचार गर्नुहोस्
जब तपाइँ आफ्नो जागिर वा तपाईंको क्यारियर परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यसले जीवनका थुप्रै पक्षहरू, विशेष गरी एक परिवार र आर्थिक दृष्टिकोणबाट परिणाम हुन सक्छ।
यो महत्वपूर्ण छ, परियोजना समाप्त भएपछि एक पटक, व्यावसायिक सुधारमा परिणामहरू ठीक तरिकाले प्रभाव मापन गर्न।
टिप # 6: बजार अध्ययन गर्नुहोस्
लक्ष्य एक अनिश्चित र अस्थिर काम फेला परेन, त्यसैले यस क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न इन्टर्नशिपको लाभ उठाउनुहोस् र हेर्नुहोस् कि यो एक विश्वसनीय र स्थायी रूपमा हो।
टिप # 7: तपाइँका क्षमताहरू हाइलाइट गर्नुहोस्
मूल्याङ्कनले अन्य चीजहरू बीचमा आफ्नो कौशलको भण्डारण लिन अनुमति दिन्छ। त्यसैले यो यसको लागि प्रयोग गर्न राम्रो छ तपाइँका क्षमताहरू बढाउनुहोस् नियोक्ताहरु संग।
एक भर्ती रिभल्ट मा एक व्यक्ति को भर्ती गर्न को लागी जब अनिच्छुक हुन सक्छ, लक्ष्य उसलाई आश्वासन र उनलाई भरिएको छ को लागि आवश्यक सबै कौशल छ भनेर देखाउन।
सफल कौशल मूल्याङ्कनका लागि7युक्तिहरू अगस्ट 19th, 2018Tranquillus
अघिल्लोएक लामो अभाव पछि काम गर्न सफल फिर्ता
निम्नफ्रान्सेली जान्न उत्तम स्रोतहरू